Kanada nandefa taratasy fanamarinana fitsangatsanganana vaksinin'ny COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Kanada nandefa taratasy fanamarinana fitsangatsanganana vaksinin'ny COVID-19 vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Namoaka taratasy fanamarinana fitsangatsanganana vaksiny COVID-19 vaovao i Canada.
Ny antontan-taratasy fitsangatsanganana nomerika kanadiana vaovao dia hanana kaody QR amin'ny fizahana amin'ny seranam-piaramanidina, gara sy ny tohatry ny fidirana hafa.
Ny taratasy fanamarinana momba ny vaksiny dia hanana marika famantarana kanadiana ary mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ara-pahasalamana lehibe.
Ny antontan-taratasy dia ahitana ny anaran'ny olona iray, ny daty nahaterahana ary ny tantaran'ny vaksiny COVID-19 - anisan'izany ny fatra azon'ny olona iray sy ny fotoana nanaovana azy.
Ny Kanadiana dia tsy afaka miditra amin'ny fiaramanidina amin'ny fitsangatsanganana any ivelany na an-trano raha tsy misy taratasy fanamarinana momba ny vaksiny manomboka ny 30 Novambra.
Kanada Praiministra Justin Trudeau nanambara androany fa misy fanamarinana vaovao momba ny fitsangatsanganana vaksiny COVID-19 natomboky ny governemanta ao amin'ny firenena.
"Rehefa mikasa ny hanomboka dia indray ny Kanadiana dia hisy ny taratasy fanamarinana manara-penitra momba ny vaksiny," Trudeau hoy izy, nandrisika ny Kanadiana izay mbola tsy nanao izany mba hanao vaksiny haingana araka izay tratra. "Afaka mamarana ity areti-mifindra ity isika ary miverina amin'ny zavatra tiantsika."
Ny governemanta nasionaly dia handoa ny famoahana ny pasipaoro fanaovana vaksiny namboarina, Trudeau hoy. "Hanina ny tabilao izahay."
In Kanada, ny fikarakarana ara-pahasalamana dia ataon'ny governemantam-paritany amin'ny ankapobeny ary ny ankamaroan'ny governemanta nasionaly no mamatsy ara-bola, indraindray mitarika ady ara-politika momba ny fahefana ary iza no mandoa vola.
Ny faritany sasany, anisan'izany Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland ary Labrador ary ireo faritany telo avaratra, dia efa nanomboka nampiasa ny fenitra nasionaly ho an'ny taratasy fanamarinana momba ny vaksiny, hoy i Trudeau.
Ny antontan-taratasy fitsangatsanganana dizitaly vaovao, mitondra ny anarana hoe Passport Vaccine, dia hanana kaody QR amin'ny fizahana amin'ny seranam-piaramanidina, ny gara sy ny toerana fidirana hafa.
November 29, 2021 amin'ny 06: 11
Fantatray fa namoaka pasipaoro vaksiny COVID-19 manara-penitra i Canada mba hanamora ny fandehanan'ny olom-pirenena any ivelany, hoy ny praiminisitra Justin Trudeau. Ny antontan-taratasy nomerika nambara tamin'ny alakamisy dia hanana kaody QR ho an'ny scan amin'ny seranam-piaramanidina, gara ary toerana fidirana hafa. Rehefa mipoitra ny fepetra takian'ny vaksiny vaovao ho an'ny mpandeha, dia miasa izahay mba hahazoana antoka fa ireo izay mandeha dia mahazo fidirana azo itokisana.